कहिले बस्ला संवैधानिक इजलास ? – Sancharak
Home > पत्रपत्रिकाबाट > कहिले बस्ला संवैधानिक इजलास ?
कहिले बस्ला संवैधानिक इजलास ?
Sancharak .com ३ भाद्र २०७५, आईतवार ०६:५५ August 19, 2018 पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं, भदौ ३ ।
संवैधानिक इजलास दुई हप्तादेखि बसेको छैन । सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी बिदामा बसेका कारण इजलास नबसेको जानकारी दिँदै सर्वोच्च अदालतका सह–प्रवक्ता नगेन्द्र कालाखेतीले नेपाल भने, ‘इजलास नियमित बसिरहेकै छ । जोशी श्रीमान् बिदामा बसेकाले बिदा बसेको दिनपछि संवैधानिक इजलास नबसेको हो ।’
सर्वोच्चका अनुसार गत असारसम्म संवैधानिक इजलासमा १ सय ९९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । संवैधानिक मुद्दा मामिला हेर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन भएको हो । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणकै कारण बैठक अन्योल भएको देखिएको छ ।
संविधानको धारा १३७ बमोजिम गठन भएको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका अन्य ४ जना वरिष्ठ न्यायाधीश रहने गरी ५ सदस्यीय रहने व्यवस्था छ । हाल संवैधानिक इजलासको नेतृत्व कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले गरिरहेका छन् ।
जोशी भोलि(सोमबार)सम्मका लागि बिदामा बसेका छन् । जोशी बिदामा बसेपछि कायममुकायम प्रधानन्यायधीशको जिम्मेवारीमा वरिष्ठ न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र रहेका छन् । आजको नेपाल समाचारपत्रमा यो खबर छापिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनमा सञ्चारकर्मीको ठूलो भूमिका : तुम्बाहाङ
व्यवसायीको कोटामा युरोप जाँदै कर्मचारी
प्रधानमन्त्री कार्यालय झन् शक्तिशाली
कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन यस्तो तयारी